7887 Healthcare Call Center
ရောဂါ A to Z
ဆေးဝါး A to Z
အောက်စီဂျင်အိုး အရောင်း၊ အငှားဌာနများ
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူနိုင်သည့်နေရာများ
HIV - ဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးဆေးခန်းများ
United Pharma Myanmar ရုံးလိပ်စာများ
အကြော၊ အဆစ်နှင့် ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆေးခန်းများ
on: 28 Feb, 2017
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုသည်က ကြီးထွားခြင်းနှင့် မတူ။ လုပ်တတ်လာခြင်း၊ နားလည်လာခြင်းဟု အလွယ်ပြောနိုင်သည်။ အသက်သုံးလအရွယ် ကလေးကို ခါးမတ်မတ်လေး ကိုင်ပေးလိုက်ပါက ခေါင်းလေးက သူ့ဟာသူလိုက်ထောင်နိုင်လာသည်။ အသက်လေးလ ကလေးကို ကိုယ်နှင့်ခြေ မတ်မတ်လေး စားပွဲပေါ် ထောင်ကိုင်ထားပါက ခြေဖဝါးလေးနှင့် သူ့အလေးချိန်ကို သူစမ်းထိန်းကြည့်လာသည်။ မှောက်တတ်လာ၊ လှန်တတ်လာတာ သိပ်အရေးမပါလှ။ အသက်လေးလကလေးကို မှောက်ခုံလေး...
ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ကလေးများ အသက် တစ်နှစ်နှင့် နှစ်လအရွယ်ခန့်တွင် လမ်းလျှောက်လေ့ ရှိကြသည်။ ၁၀ လနှင့် လျှောက်သူလည်း ရှိချင်ရှိမည်။ တစ်နှစ်ခွဲမှ လျှောက်သူလည်း ထုနဲ့ဒေး။ စောလျှောက်တာနှင့် နောက်ကျလျှောက်တာ ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ဘာမှမကွာ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ယောကျ်ားလေးများက အနည်းငယ်စော၍ လျှောက် တတ်ကြသည်။ အသက်တစ်နှစ်ခွဲကျော်အထိ မလျှောက်သေးသည့် ကလေးများကိုတော့ လမ်းလျှောက်နောက်ကျ...
အသားစားလျှင် သန်ထတတ်သည် ဟူသော အယူအဆမှာလည်း အထူးသဖြင့် လူကြီးများ တွင် ရှိနေတတ်ကြသည်။ ကလေးငယ်များကို အသားများများ မကျွေးတတ်ကြပေ။ သန်ကောင်ကျသော (သန်ရှိသော) ကလေးကိုဆိုလျှင် အသားအနည်းငယ်သာ ကျွေးလေ့ ရှိသည်။ ကလေးငယ်များသည် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဆဲ အရွယ်များဖြစ်ကြသဖြင့် ပရိုတင်းဓာတ် ပိုမိုလိုအပ်ကြသည်။ ပရိုတင်းဓာတ်ကို အဓိကရရှိနိုင်သည်မှာ အသားများပင်ဖြစ်၍ အသားကို ပိုကျွေးရန် လိုအပ်သည်။ သန်ကေ...
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ၏ ချက်၌ နနွင်း (သို့) ဆေးတို့ဖတ်ထည့်ခြင်း
မွေးကင်းစ ကလေးငယ် ချက်ကြွေပြီးနောက် အနာကောင်းစွာ မကျက်လျှင် နနွင်း၊ (သို့) ဆေးတို့ဖတ် သိပ်ထည့် အလေ့အထရှိနေကြပါသည်။ ဤသည်မှာ ရှေးအစဉ်အဆက် ပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နနွင်း၊ (သို့) ဆေးတို့ဖတ် သိပ်ထည့်၍ ပိုးဝင်ပြီး အနာဖြစ်လိမ့်မည်။ မေးခိုင်ရောဂါဖြစ်တတ် သည်ဟု ပြောမိလျှင် `တို့တစ်သက်လုံး ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာ၊ တို့ငယ်ငယ်က တို့မိဘတွေလည်း လုပ်ခဲ့တာ၊ မင်းတို့ငယ်ငယ်ကလည်း ငါတို့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့...
တုတ်ကောင်လေး တုတ်ကောင်လေး တော်တော်ဒုက္ခပေး
`ကလေး ဝမ်းသွားရင် အကောင်ဖြူဖြူသေးသေးလေးတွေ အများကြီးပါလာတယ်။ သမီးလေးက စအိုဝယားတယ်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ တုတ်ကောင်လေးတွေ စအိုဝမှာ တွေ့ရတယ်။´စသည့် `တုတ်ပြဿနာ´ သည် ကလေးငယ်များနှင့် သူတို့၏ မိဘများ၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားနေပြီး ကြီးမားသော မဟာပြဿနာ ဖြစ်နေပါသည်။ ယင်းပြဿနာ ကောင်လေးကို အပ်ချည်သန်ကောင် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပင်အပ်သန်ကောင် ဟူ၍လည်းကောင်း ချစ်စနိုးခေါ်ဆိုကြသည်။ ကျောင်း...
ဗီတာမင် စီ သည် ရေ၌ပျော်ဝင်သော ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။ ဗီတာမင် စီကိုနောက်တစ်နည်းအားဖြင့် အက်စ်ကိုးဗစ် အက်စစ် (ascorbic acid) ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၎င်း ဗီတာမင်ကို သတ္တဝါ အတော်များများ၏ ကိုယ်တွင်း၌ ဂလူးကို့စ်မှ တစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြသော်လည်း လူ၊ မျောက်၊ ပူး၊ ငှက်အချို့နှင့် ငါး အနည်းငယ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ကား လုံးဝမထုတ်နိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် အစားအစာမ တစ်ဆင့် ဗီတာမင် စီ ကိုရဖိ...
မွေးကင်းစကလေးတွေ ငိုတာကိုတော့ မိဘတိုင်းရှောင်လွဲလို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ ကလေးတွေဆိုရင် ညသန်းခေါင် ကျော်ကြီးမှာ ထငိုတာတို့၊ မအိပ်ဘဲ ငိုပဲငိုနေတာတို့တောင် ရှိပါတယ်။ ကလေးဟာ ဘာကြောင့်ငိုရတာလဲနဲ့ မိဘတွေ ဘာလုပ်ပေးလိုက်ရင် အငိုရပ်ပြီး ကျေနပ်သွားမလဲဆိုတာ သိစေဖို့ ကလေးအများစု ငိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဗိုက်ဆာလို့&nbs...
ကလေးငယ်များအား မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးရန် အခက်အခဲရှိသောအခါ အစားထိုး တိုက်ကျွေး တတ်ကြသည်မှာ နွားနို့ပင်ဖြစ်သည်။ နွားနို့မှာ မိခင်နို့နှင့် ပါဝင်မှု မတူညီပေ။ တစ်ချို့သောနွားနို့မှာ အာဟာရဓာတ်ပစ္စည်းများ ပိုမိုပါဝင်ပြီး တစ်ချို့မှာ လျော့နည်းနေသည်။ နွားနို့ (သို့) နွားနို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဖော်မြူလာများ တိုက်ကျွေးသောအခါ ဓာတ်မတည့်မှု ပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ နွားနို့ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် က...
မိဘများ၊ အုပ်ထိန်းသူမျာအနေဖြင့် ကလေးများ မတော်တဆအန္တရာယ်နှင့် မတွေ့ကြုံရအောင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဂရုစိုက်ပါ။ ၁။ ကလေးများ ကစားရာတွင် မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦး အနားမှာရှိပါစေ။ ဖိနပ်စီး၍ ကစားပါစေ။ ကလေးအချင်းချင်း ထိခိုက်စေမည့် ကစားနည်းများကို မကစားခိုင်းပါနှင့်။ ၂။ ကလေးများ အမြင့်မတက်အောင် သတိပေးပါ။ လှေကားအဆင်းအတက်...
Ultrasound အာထရာဆောင်း (သို့) တီဗွီဓာတ်မှန်
အာထရာဆောင်းမှာ ခေတ်မီဝမ်းတွင်းသနွေသား ရောဂါရှာဖွေမှုတွင် ပင်မမဏ္ဍိုင် ဖြစ်သည်။ အသံကိုအခြေခံ၍ တီထွင်ထားသော အဆိုပါကိရိယာမှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများ၏ တည်ဆောက်ပုံ၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ သနွေသား၏ ရွေ့လျားနိုင်မှုများ။ ယခုမျက်မှောက်ခေတ်တွင် သားအိမ်အတွင်း ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အနှစ် ၃၀ ခန့် အသုံးပြုပြီး တိုင်အောင် ရောဂါရှာဖွေမှုပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသေ...
All of the contents on this site are either gathered among informative primary sources or edited byagroup of registered medical doctors.
2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar